खडेरीले हिउँदे बाली उत्पादनमा कमी आउने !! | सुदुरपश्चिम खबर
खडेरीले हिउँदे बाली उत्पादनमा कमी आउने !!
त्पादनमा ह्रास आउने संकेत देखिएसंगै जिल्ला बाहिरबाट खाद्यान्न आयात वृद्धि हुनेछ । खडेरीका कारण बालीनाली सुकेपछि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने खाद्यान्न परिमाण वृद्धि हुने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सिंहले जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक बर्ष जिल्लामा हिउँदे बाली उत्पादनमा गिरावट आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । (ninglashainionline बाट सभार)